Rija Tahiana : mivelatra ny fanabeazana ny tanora amin’ny « facebook » | NewsMada
Rija Tahiana : mivelatra ny fanabeazana ny tanora amin’ny « facebook »
Manokatra ny pejy “facebook”-ny ho an’ny tanora i Rija Tahiana, mpanentana fanta-daza ary efa matihanina amin’ny fahitalavitra Dream in. Natao hifanabeazana eo amin’ny samy tanora izany pejy izany.
Tafiditra ao anatin’ny tetikasany ho fandraisana anjara amin’ny fitaizana ny tanora amin’ny alalan’ny fampiasana “facebook” ity pejiny ity. Efa manodidina ny 50.000 ireo tanora mitsidika ny pejy.
Malalaka ny fanehoan-kevitra indrindra ho an’ny ankizivavy. Betsaka ireo mitantara ny fiainany indrindra ny sedram-piainana nolalovany. Betsaka ireo mitaraina olana amin’ny fitiavana. Ny sasany mitantara ny fahombiazana.
Mifampaka lesona ireo tanora amin’ny tantara entiny ao anatin’ny pejy. Betsaka ireo tovovavy mandray anjara amin’izany. Hararaotina hampitana hafatra ho an’ny tanora indrindra ny firoborobon’ny fampiasana “facebook” amin’izao fotoana.
Anisan’ny hevitra tiana hovoizina indrindra koa ny fikirizana mafy mba hanatrarana ny tanjona napetraka. Mitaky filofosana mafy ny fahombiazana amin’ny zavatra iray. Tsy ilaina ny hakamoana na ny mandanilany fotoana. Mila tia karokaroka ary tsy maintsy sahisahy sy manao dingana.
Mampahery ny tanora miditra ao anaty pejy izany fikirizana voizina izany. Mitondra ny tanora amin’ny fahombiazana sy ny fitondrantena tsy mivaona ihany koa.